नेकपामा 'सी पथ' को बहस : विचार की विकास - Samatal Online
नेकपामा ‘सी पथ’ को बहस : विचार की विकास
९ आश्विन २०७६, बिहीबार ९ आश्विन २०७६, बिहीबार Santa Kumar Shrestha0Comments
राजनीतिक पार्टी कुनै विचारबाट निर्देशित हुन्छन् । त्यो नै उनीहरुको पार्टी राजनीतिको संबिधान हो । अहिले तत्कालिन एमाले र माओवादी एकीकरणपछि कुन विचारमा आगाडी बढ्ने भन्ने निर्क्यौल नभएको बेला नेकपामा सी पथ’ को बहस अब औपचारिक रुपमा नै अगाडी आएको देखिएको छ ।
एक किसिमले वैचारिक संक्रमणकालमा रहेको नेकपा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादकै बाटोमा जाने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ । अहिले शिर्ष नेताहरु महाधिवेशनले टुंगो लगाउने गरि सहमतिमा पुगेका छन् । तर यसै बीचमा ‘सी पथ’ छिरेपछि अबको नेकपा कुन बाटोमा जान्छ भन्ने यकिन साथ भन्ने अवस्था रहेको देखिदैन ।
दुई देशका सत्तारुढ पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध हुनुलाई पार्टी बीचको मात्र सम्बन्धका रुपमा हेर्न मिल्दैन र सकिदैन । नेकपाको ‘सी पथ’ को प्रशिक्षण पछि राजनीति तरंगित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कडा प्रतिक्रिया दिदै देशलाई सी पथमा जान नदिने उदघोष गरेको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले चीनको जस्तो सत्ता नेपालमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
नेकपाका नेताहरुले प्रशिक्षणका बारेमा राम्रो र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपनि राजनीतिक वृतमा यसको प्रभाव सकरात्मक परेको र पर्ने देखिएको छैन । आमरुपमा सरकारको काम गर्ने तरिकाबाट खुशी नभएको अवस्थामा ‘सी पथ’ को प्रशिक्षण मात्र लिएर कसरी हुन्छ ? काम चीनमा भएको जस्तो हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ । सरकारले डेढ बर्षमा आम जनतामा आशाको संचार गराउन असफल भएको अवस्थामा चिनियाँ विचारको मात्र वकालत गर्नु असान्दर्भिक देखिन्छ । महंगी बढी रहेको छ, जुन सत्तारुढ दलकै नेताहरुले महंगी बढ्यो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्, भ्रष्ट्राचारका अनेकौ काण्ड बाहिर आएका छन् ।
सामान्य रुपमा बन्नुपर्ने सडक, पुलको निर्माण सहज रुपमा हुन सकेको छैन । असारे विकासको प्रवृतिलाई झन् बढावा दिइएको छ । संस्थागत भ्रष्ट्राचार झन् बढेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘सी पथ’ नै अपनाए पनि त्यो विचार मै सिमित हुने देखिन्छ । अहिले काम गरेर देखाउने अवसर पाएको बेला सरकार र सत्तारुढ दल विचारको खेतीमा अल्मलिएको अनुभव भएको छ, जसले आमा जनतामा निराशा नै बढाउछ । मुख्य कुरा अहिले नेतृत्वमा रहेकाहरुले काम गर्ने तरिका बदल्नु हो, जुन हुन सकिरहेको छैन ।